Sawirro:-Galmudug oo soo bandhigtay Meydadka rag weeraray Dhuusamareeb – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 2 February 2021 2 February 2021
Ciidanka Xoogga dalka gaar ahaan qeybta 21-aad Guutada 15-aad iyo Ciidanka Gor-Gor iyo xubno ka tirsan Al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa uu dagaal ku dhexmaray duleedka Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug.
Saraakiisha Ciidanka oo warbaahinta kula hadlay duleedka Dhuusamareeb ayaa sheegay in ay dileen 3-xubnood oo ka tirsanaa Al-shabaab, kuwaasi oo la xusay inay ahaayeen rag weerar loo adeegsaday madaafiic xalay ku qaaday Magaaladaas.
Sidoo kale Saraakiisha Ciidanka ayaa tilmaamay in ragga dilay uu ku jiray Al-shabaab u qaabilsanaa deegaanada u dhexeeya Ceelbuur iyo Dhuusamareeb, waa sida hadalka loo dhigay, sidoo kalena soo bandhigay Meydiisa.
Guddoomiyaha Caasimadda Galmudug Macalin Cabdiraxmaan Geeda-qaroow ayaa sheegay in Nin kale oo kamid ahaa ragii weerarka soo qaaday la qabtay, isaga oo dhaawac ah, ayna qabsadeen hub oo ah nooca fudud.
Wafdi ka socda Dowladda oo diyaarad qaas ku tegay Degmo la go’doomiyey